Gulufkii ciidamada Suuriya ee magaalada Ximsi oo galay maalintii afaraad – Radio Daljir
Gulufkii ciidamada Suuriya ee magaalada Ximsi oo galay maalintii afaraad
Febraayo 7, 2012 12:00 b 0
Demishiq,Feb 7 -Weerarkii ciidamada nidaamka madaxweyne Bashaar Al-assad ku qaadeen magaalada Ximsi ayaa galay maalintii afraad ,iyadoo ciidamada dowladdu ay xoojinayaan weerarka ay ku hayaan degaanada ay ku xooganyihiin qolyaha iskacaabinta.
Boqolaal qof ayaa la soo weriyey in ay ku dhinteen magaalada iskacaabinta ku jirta ee Ximsi,iyadoo ciidamada dowladu ay saacadihii ugu dameeyey xoojiyeen duqaymaha iyo madaafiicda xoogan ay ku garaacayaan degaanada la rumaysanyahay in ay dhufaysyada adag ka qoteen kooxaha halganka kula jira ciidamada Suuriya ee la magac baxay ciidamada Suuriya ee xorta ah.
Kooxahaasi hubaysan ee isku magcaabay ciidamada Suuriya ee xorta ah ayaa sheegaya in ay jilibka u laabeen duulaano iyo iskuday ay ciidamada dowladu ku doonayeen in ay dhowr aagg kaga soo galaan magaalada Ximsi, waxana ay wacad ku mareen in ay dagaalamayaan illaa daqiiqada ugu dameysa.
Dagaaladan magaalada Ximsi ayaa sii socda,iyadoo wasiirka arimaha dibadda ee dalka Russia Sergey Lavrov uu ku wajahanyahay magaalada Dimishiq ee xarunta dalka Suuriya, si uu wadahadal ula yeesho madaxda sarsare ee nidaamka Assad.
Dalka Russia iyo shiinaha ayaa dhowaan is hor taagay qaraar laga soo saarilahaa golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo la doonayey in lagu canbaareeyo rabshadaha ka taagan dalka Suuriya,islamarkaana loogu baaqayey Madaxweyne Assad in uu xilka madaxtinimada ee dalkaasi ku wareejiyo ku xigeenkiisa,waxana tallaabada Beijin iyo Moscow si kulul u canbaareeyey dalalka reer galbeedka iyo kuwa dunida carabta.
Dowladda Turkiga oo beenisay inay raashiin dhacay ka qaybisay Muqdisho
Baahin: Isniin, Feb 06, Maxamed C. Kooshin ~ Daljir ~ Garowe. Munaasabado xus ah ee hirgelinta barnaamijka dabar-goynta gudniinka fircooniga ah oo lagu qabtay Puntland; Is-rasaasayn deegaanka Sool-joogto ku dhex martay ciidamada deegaanka & kuwa Somaliland; Madaxda gobolka Mudug oo cambaareeyey dilka guddoomiyaha xaafadad Israac, Galkacyo.